မှီခိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်သူကင်းမဲ့နေတဲ့ လူနာများအတွက် ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးဖိုးဝါးခအကူအညီများကို ပံ့ပိုးလှုဒါန်းပေးနေတဲ့ Myanmar Youth Charity Group ကို ဝိုင်းပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် | Su See Yar - Maynmar's first crowdfunding platform
မှီခိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်သူကင်းမဲ့နေတဲ့ လူနာများအတွက် ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးဖိုးဝါးခအကူအညီများကို ပံ့ပိုးလှုဒါန်းပေးနေတဲ့ Myanmar Youth Charity Group ကို ဝိုင်းပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ပင်မစာမျက်နှာ / မှီခိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်သူကင်းမဲ့နေတဲ့ လူနာများအတွက် ဆေးကုသစရိတ်၊ ဆေးဖိုးဝါးခအကူအညီများကို ပံ့ပိုးလှုဒါန်းပေးနေတဲ့ Myanmar Youth Charity Group ကို ဝိုင်းပြီး ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
အခက်အခဲတွေကြားထဲက ခက်ခဲနေတဲ့လူတစ်ချို့အတွက် အလှူခံပါရစေ.......
Myanmar Youth Charity Group (M.Y.C.G)အသင်းကို ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အလှူစုလုပ်ရာကနေ အကြောင်းပြုလာတာပါ။ အသင်းစတင်ချိန်မှာ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်း ၄ဦးသာရှိပါတယ်။ အခုဆို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က သူငယ်ချင်းအယောက် ၅၀နီးပါးနဲ့ လစဥ်အလှူငွေများစုပီး လှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အခက်အခက်ဖြစ်နေသူတစ်ချို့ကို ကျွန်မတို့အသင်းက တတ်စွမ်းနိုင်သလောက်အားဖြည့်လှူဒါန်းနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအပြင် တခြားဒေသန္တာရအခက်ခဲတွေကိုပါမကျန်လှူဒါန်းပေးဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာ ဆေးရုံစရိတ်၊ ဆေးကုသစရိတ်တွေမြင့်တက်လာတဲ့အပြင် နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြားမှာ အခြေခံလူတန်းစားတွေဟာ မိသားစုစားဝတ်နေရေးဖူလုံဖို့အတွက်ကိုပဲ အလေးထားနေရလို့ ကျန်းမာရေးအတွက်အချိန်မပေးနိုင်၊ ကုသဖို့ငွေအင်အားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အသက်ပေါင်းများစွာ မလိုအပ်ပဲ ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ ဒီ၅လပိုင်း ၁၄ရက်နေ့ကလည်း ကျွန်မတို့ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ လူနာတယောက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ မျှော်လင့်ချက်နည်းပေမယ့် ရတဲ့နည်းနဲ့တော့ရအောင်ကယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့စိတ်ရင်းခံ မေတ္တာတရားနဲ့သာ ဘာမှမတော်စပ်ကြပေမယ့် မိသားစုဝင်တွေကဲ့သို့ အချိန်မမှီနိုင်ဘူးထင်ပေမယ့်လဲအသက်ဆက်ရှင်မယ့်နေ့ရက်လေးတွေ သက်သာလို သက်သာငြား အစွမ်းကုန် ကူညီစောင့်ရှောက် ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေမင်းနဲ့ ကျွန်မတို့အားပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ ကျွန်မတို့ရှုံးသွားလို့ သူ့ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဟိုတလောကဆိုလည်း ၁လပိုင်းထဲက ကျွန်မတို့ ဆေးခန်းပြသ ပေးနေတဲ့ ဆီးချိုတက်ပြီး ခြေထောက်ကြွက်ကိုက်ခံရတဲ့ လူနာဆုံးပါးသွားပါတယ်။ ဆေးကုသစရိတ်တွေကြောင့် မိမိရောဂါကုသဖို့ကို ဦးစားမပေးနိုင်ဘဲ မိသားစုအရေးအတွက်ပဲ လုံးပန်းနေခဲ့ရတော့ အချိန်မှီ ကုသခွင့်မခံယူလိုက်ရဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဥယာဉ်တစ်ခုမှာ အလှဆုံးပန်းတွေက အရင်ဆုံးခူးယူခံရတယ်လို့ပဲ ကျွန်မတို့စိတ်ကို ဖြေခဲ့တယ်။ ဒီဘဝမှာပဲ ဝဋ်ကြွေးများ အားလုံးကြေကြပါစေရှင်။
အဲ့လိုစားဝတ်နေရေးပြဿနာနဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကြားမှာလွန်ဆွဲနေရတဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခမတက်နိုင်လို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မပြေလည်တဲ့သူတွေ ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လောက်တောင် ရှိနေပြီလဲ။ အဲ့လိုလူတွတွေကို ပိုမိုကူညီနိုင်ဖို့ ကျွန်မတို့အသင်းသည် ထိထိရောက်ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး ကူညီမှုများကို ဆက်လက်ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် ရံပုံငွေကမ်ပိန်းတည်ဆောက်ပြီး လှူဒါန်းပါဝင် ကူညီပေးဖို့ရာ အလှုရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အသင်းမှ ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ ဆေးကုသပေးပြီး ဆေးဝါးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လူနာတစ်ချို့လည်းရှိနေပါတယ်။ ပြုစုသူမဲ့နေတဲ့ဆေးစွဲသောက်နေရသောလူနာများ၊ Oxygen အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ လူနာတစ်ချို့ နှင့် ငွေကြေး ချို့တဲ့လို့ ကလေးအာဟာရနို့မှုန့် ဝယ်ရန်ပင် ကျပ်တည်းနေတဲ့ သူတွေ၊ အရေပြားလေးဘက်နာ၊ လည်ချောင်းကင်ဆာ၊ ဆီးချို၊ TBရောဂါ နှင့် တခြားခွဲစိတ်ရောဂါလူနာတွေပါမကျန် ဆေးကုသဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အသင်းကနေပြီး အလှူငွေများကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့အသင်းမှ ၎င်းတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်၊ အခက်အခဲတွေအတွက် ပိုမိုလှုဒါန်းကူညီပေးနိုင်ရန် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုများ ရရှိလာနိုင်ရန်၊ အလှုရှင်များအနေနဲံ မိမိတို့တတ်နိုင်သလောက်အခက်ခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်လှူဒါန်း နိုင်ရန်အတွက်အလှူခံနှိုးဆော် လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
မိမိပြုလုပ်ခဲ့သော ကုသိုလ်တရားများသည်သာ သံသရာအတွက် မှီခိုအားထားရာပါ......ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ခြင်းသုခ နှင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ
Facebook : https://www.facebook.com/Myanmar-Youth-Charity-Group
ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသစရိတ်၊ Oxygen နှင့် ကလေးအာဟာရနို့မှုန့်ငွေကျပ် (၁၀) သိန်း ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ထားပြီး လှူဒါန်းမည့် လူဦးရေကို အလှူငွေရတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး လှူဒါန်းသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
1.25L MMK Funded
10L MMK Goal
Myanmar Youth Charity Group (M.Y.C.G) was established on 30 October 2019. The idea of the team came after donating with friends. At the start of the group, we only had four friends and now we have about 50 friends from every stage. We collect funds and donate monthly.
(လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လှုဒါန်းမှုကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမည်နဲ့အလှုငွေကို ကျွန်မတို့ M.Y.C.G facebook pageမှာ ဂုဏ်ပြုဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ campaignပြီးဆုံး၍ ရရှိသောအလှုငွေများကို လှုဒါန်းထားသောမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများကိုလဲကျွန်မတို့ facebook pageမှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။)